बेलारुस, Bialowieza वन। पर्यटन, पर्यटन, समीक्षा
एक पटक एक समय मा युरोप को सम्पूर्ण ढाकिएको थियो घने जंगल। यो कुमारी thicket एक भाग जस्तै पोल्याण्ड र बेलारुस रूपमा देशहरूको इलाका मा रह्यो। Bialowieza वन - अब विशाल जंगल रूपमा ज्ञात। तथापि, भूगोल वैज्ञानिक यो ecoregion उल्लेख "Sarmatian मिश्रित वन।" यस लेखमा हामी यसको बेलारूसी भाग मा Bialowieza वन थाह गर्न संभावना छलफल गरिनेछ। के यो आरक्षित, (तपाईं 1991 मा सम्झना भने, र शीर्ष अधिकारीहरु) जो कोहीले तर foresters गरौं जो छैन? वा यसलाई भ्रमण गर्न सम्भव छ मात्र mortals धक्का? कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न? जहाँ रहन? खाना कसरी स्थापित छन्? र यो सबै भन्दा राम्रो छ जब Bialowieza वन भ्रमण गर्न? हामी समीक्षा विश्लेषण गरेर सिकेका सबै। र तपाईं कुमारी प्रकृति को काखमा एउटा अविस्मरणीय छुट्टी योजना भने, तपाईं पक्कै Bialowieza वन रुचि हुनेछ।
एक विशाल क्षेत्र ओगटेको छ जो कुमारी thicket, पहिलो उल्लेख, हामी वर्ष 983 फिर्ता तिथिहरु जो Ipatiev क्रनिकल, भेट्ने। पनि त, केन्द्रीय र पूर्वी युरोप मा वनको एक ठूलो संख्या तल कटौती गरिएको छ। तसर्थ, धर्मनिरपेक्ष शासक thickets यसको शिकार लागि भूमि आरक्षित भयो। हामी Bialowieza वन प्रकृति रिजर्व को इतिहास मा पहिलो छ भनेर भन्न सकिन्छ। यस कुमारी वन हालिदिए गर्न पोलिश Korol Yagaylo आफ्ना प्रजालाई जो forbade अनुसार, 1409 को एक उर्दी छ। शिकार त्यहाँ सही थियो मात्र उहाँ र उहाँका भाइ Witold। जो सबैतिर सखाप युरोपेली भैंसिहरु, केवल Bialowieza वन, एक प्रजाति रूपमा, बायाँ। पोल्याण्ड यस भाग सोभियत संघ सारियो जब (1939 मा), को BSSR को जनता Commissars को परिषद को निर्णय आफ्नो वन आरक्षित स्थिति सुरक्षित थियो। र 1992 मा, राष्ट्रिय निकुञ्ज "Bialowieza वन" मानवता को विश्व विरासत रूपमा यूनेस्को मा समावेश गरिएको थियो। यो प्रकृति आरक्षित - प्रकृति को एक साँचो चमत्कार, वर्तमान दिन हाम्रो सन्तान को लागि, आषा बाँचे र, छ जो।
को Bialowieza वन कहाँ छ
हामी उल्लेख रूप मा, relic primeval वन पोल्याण्ड र बेलारुस को एक क्षेत्र। यो बाद अवस्थामा Bialowieza वन ब्रेस्ट र Grodno क्षेत्रहरु मा स्थित छ। को आरक्षित को मनोरंजन क्षेत्र प्राप्त कसरी सर्वश्रेष्ठ गर्न? समीक्षा ब्रेस्ट गर्न यात्रा सुरु गर्न सल्लाह छन्। यो शहर दुई पटक हरेक दिन एक दिन (आधा मा पछिल्लो आठ र आधा पछिल्लो दुई) एक्सप्रेस बस चल्छ। तर तपाईं त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन् र अर्को यात्रा परिवहन। जहाँ, वास्तवमा, आरक्षित गर्न प्रवेश छ गाउँमा Kamenyuki, गर्न Kamenetz र थप - आफ्नो कार मार्ग ब्रेस्ट मा संकेत अनुसार, बढुवा गर्नुपर्छ। मिन्स्क को Bialowieza वन मा भ्रमण बुक गर्न सम्भव पनि छ। तर, तीन सय र चालीस किलोमिटर द्वारा विभाजित पार्क देखि बेलारुस को राजधानी यस्ता भ्रमणहरू को मूल्य एकदम कारण पेट्रोल को लागत गर्न हुर्किसकेका छ।
उपलब्ध सरल पर्यटक छ
राष्ट्रिय निकुञ्ज "Bialowieza वन" धेरै क्षेत्र विभाजन गरिएको छ। तिनीहरूलाई को एक साँच्चै शब्द को सख्त अर्थमा सुरक्षित छ। कसैले जंगल dwellers शान्ति बाधा गर्न र प्राचीन वातावरण जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न अनुमति छैन थिए। तर त्यहाँ Bialowieza वन र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा छ। प्रवेश शुल्क। गाउँमा Kamenyuki टिकटको कार्यालयमा प्रवेश छ। मात्र स्वीकार , बेलारुसियाली rubles तपाईं अग्रिम ठूलो शहर मा स्थानीय मुद्रा मा शेयर गर्न आवश्यक त। टिकट धेरै प्रकार बक्समा कार्यालयमा खरिद गर्न सकिन्छ। को आरक्षित गर्न प्रवेश दस हजार rubles (रूसी 35) खर्च हुनेछ। टिकट को लागि पैदल यात्रा ट्रेल्स संग नक्शा निर्भर। पोलिश सिमाना (राज्य cordon नजिक पछि) समस्या जोगिन, यो चिन्ह लगाइएको ट्रेल्स जाने छैन राम्रो छ। तपाईं एक साइकल (प्रति घण्टा एक सय रूसी rubles) भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रकृति को संग्रहालय गर्न प्रवेश भन्दा, पशुहरू संग पिंजरे र सान्टा क्लाउस को Residence अलग भुक्तानी गर्न छ। को Bialowieza वन (पार्क मा) मा बस भ्रमण घुमफिर दुई सय र दस रूसी rubles खर्च हुनेछ।
पार्क भ्रमण गर्दा
दक्षिणी बेलारुस मा जलवायु हाम्रो धेरै फरक छैन। तर, यो Bialowieza वन को प्रकृति सधैं सुन्दर छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो राम्रो दिन अब हुँदा मौसम मा मन्दिरमा भ्रमण हो। हिउँदमा, समीक्षा सान्टा क्लाउस को निवास मा पठाउन प्रोत्साहित गरिन्छ। यो भ्रमण छोराछोरीको लागि ठूलो आनन्द हुनेछ। एक वयस्क लागि Residence गर्न प्रविष्टि को लागत तीन सय रूसी rubles। टिकटको विचार को एक सेट र सान्टा क्लाउस देखि बच्चाहरु को लागि एक उपहार पनि समावेश छ। Climatic क्षेत्र जहाँ Bialowieza वन, खुसी छैन न्यानो दिन। सबै भन्दा राम्रो समय गर्मी महिना, मे र सेप्टेम्बर उल्लेख भएको आरक्षित समीक्षा भ्रमण गर्न। काम गर्दछ 2003 Residence सान्टा क्लाउस खुलेको बाटो, द्वारा मात्र हिउँदमा। कुनै पनि समयमा, शानदार वर्ण र आफ्नो सहायक आफ्नो बच्चा संग पूरा गर्न सक्षम हुनेछ।
को Bialowieza वन एउटा यात्रा समावेश जो प्याकेज, मा बेलारुस गर्न पर्यटन नै नाम को गाउँमा होटल "Kamenyuki" मा नियुक्ति सुझाव। यो होटल आरक्षित गर्न प्रवेश देखि नौ सय मीटर स्थित छ। प्रकृति को संग्रहालय नजिकै - तर हालै एक नयाँ भवन होटल "Kamenyuki" बनाइएको थियो। देश मा मूल्यहरु आरक्षित मा भन्दा धेरै कम छ। पनि गाउँमा तपाईं एक घर भाडामा लिन वा अतिथि घर संग सम्पत्ति जीवन बिताउन सक्छन्। तपाईं आफ्नो कार छ भने, यो Kamenetz रहन सस्ता हुनेछ। त्यहाँ आवास मूल्य, आश्वासन समीक्षा, पनि कम छ। संरक्षित क्षेत्र को क्षेत्र मा सानो कटेज र पाँच नौ मानिसहरूलाई भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै महँगो - तर यो छ। होटल "Kamenyuki" संख्या तीन भवन विभाग र "लक्स" "सुधार" छन्। को Bialowieza वन को क्षेत्रमा भोजन गर्न, यो आरक्षित छोड्न छैन आवश्यक छ। भोक आगंतुकों बेलारूसी भोजन को व्यञ्जन व्यवहार जो राम्रो भोजन रेस्टुरेन्ट, आशा।
प्रकृति को संग्रहालय
समीक्षा अत्यधिक यो भ्रमण विशेष गरी सिफारिस गरिएको। संग्रहालय बेलारुस को गणतन्त्र बसाबास गर्नु भनेर बोट र जनावरहरूको प्रकार को एक विचार दिन्छ। Bialowieza वन - प्राकृतिक relic एक प्रकारको। यो मृत को जोखिम लागि भरी जनावरहरू जनावर र चरा को मृत्यु गरे कि विचारणीय छ। को वृद्धि जनसंख्या सम्पूर्ण वातावरण बिगार्न गर्न खतरनाक मात्र किनभने यहाँ जंगली boars गोली। तसर्थ, संग्रहालय को प्रदर्शनी धेरै सत्तरी रूपमा वर्ष छ। समीक्षा दावी एक दुःखी वा भयानक दृष्टि प्रतिनिधित्व छैन भरी छ। तिनीहरूले भर्खरै सिर्जना "परिदृश्य" साँचो मालिकको मा धेरै उच्च गुणवत्ता फिट छन्। तसर्थ, हामी ब्वाँसा एक वास्तविक गुफा, एक मृगको बच्चा संग roe मृग, र Bialowieza वन अन्य Fauna देख्न सक्छौं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय गर्न प्रवेश बीस-पाँच हजार rubles (रूसी 90) लायक छ। बाल टिकट - आधा मूल्य।
तपाईं आरक्षित एक पैदल वा साइकल यात्रा भ्रमण लिन भने तपाईं बेलारुस inhabiting को Fauna प्रतिनिधिको संग पूरा गर्ने मौका छ। Bialowieza वन तथापि, बाटो मान्छे र जनावर पार गर्न निकै भारी छन्। र तपाईं आरक्षित बासिन्दाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यो राम्रो aviary मा टिकट कार्यालयमा प्रवेश टिकट मा नै किन्न छ। को भैंसिहरु - स्वाभाविक, सबै आँखा जंगल को असली मालिकको संलग्न। यी शक्तिशाली भैंसिहरु एक पटक युरोप भरि बाहिर थिए। तर किनभने निर्दयी शिकार पूर्ण लोप। केवल Bialowieza वन बायाँ सानो संख्या। र primeval वन र आरक्षित थियो भएकोले उनीहरूको जनसंख्या एकदम वृद्धि। भैंसिहरु साथै, एक बाडे मा देख्न सकिन्छ - र पनि खुवाउन - जंगली बँदेल, भालु, र्याकुन कुकुर, Foxes, ब्वाँसा, मृग। बच्चाहरु को लागि - लायक वयस्कहरूको लागि बीस हजार rubles र दस हजार aviary गर्न टिकट। समीक्षा सुतेको खुवाउने पछि किनभने lunchtime जनावर मा, बिहान वा साँझ पशुहरू आउन सल्लाह छन्।
सान्टा क्लाउस को निवास
को Bialowieza वन भ्रमणमा यसको कार्यक्रममा समावेश गर्न बेलारुस निश्चित गर्न क्रिसमस पर्यटन। आखिर, मात्र होइन छोराछोरीलाई तर पनि वयस्क मा एक सय इच्छा बनाउन एक अद्वितीय मौका देखिन्छ। र तिनीहरूले पक्कै पनि अर्को वर्ष भित्र पारित गर्न आउनेछ। बेलारुसी हजुरबुवा फ्रस्ट यसको रूसी समकक्ष भन्दा फरक छ। उहाँले एक सेतो, कढाई चाँदी बेल Zupan र एउटै टोपी छ। यो सान्टा क्लाउस को निवास र हाम्रो बाबा Yaga को बहिनी बसोबास - Korgota। नयाँ वर्ष मा आफ्नो हजुरबुबा र आफ्नो नातिनी, बरफ पूर्व संग रहन आउँछ। तर पहिलो वसन्त दिन त्यो Lapland जान्छ। समीक्षा कसरी आश्वस्त गर्न, हेर्नुहोस् छोराछोरीलाई साँच्चै मनपर्छ। तिनीहरूले क्रिसमस रूख वरिपरि चलाउन, समाधान पहेली Korgoty, र अन्त मा उपहार प्राप्त - यो क्यान्डी हुन्छ जो, र जो रंग, चकलेट, र समान उपहार।
Bialowieza वन: बिरुवाहरु
तर, को पाठ्यक्रम, संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण - बच्चाहरु र पर्यटक छैन मनोरञ्जन र पारिस्थितिकी को संरक्षण। WILDWOOD धेरै बिरुवाहरु को आफ्नो चदंवा अन्तर्गत लुकाउँछ, लामो दुनिया मात्र बेलारुस को लाल बुक मा समातिए गरिएको छ, तर पनि। यी प्रकार थाह प्रकृति को संग्रहालय मा हुन सक्छ। खैर, यो हो - सबैभन्दा ब्रेस्ट क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुभएको थियो। पहिलो पर्यटकहरु संग्रहालय 1963 मा प्राप्त। निर्माण को सम्पूर्ण पहिलो तल्ला कि Bialowieza वन बस्ने जनावर लागि सुरक्षित छ। बिरुवाहरु, चरा, पुतलीहरु, मशरूम अप जोखिम शीर्ष टियर बनाउन। समीक्षा जंगल मा जाने, ज्ञान आवश्यक रकम संग पहिलो यात्रा प्रकृति को संग्रहालय गर्न सल्लाह गर्दै छन्, र त्यसपछि। हिउँदमा Bialowieza वन हिउँ परिरहेको, त्यसैले यी शैक्षिक यात्राहरु लागि उत्तम समय - गर्मी।
Bialowieza वन समीक्षा
नियम, पर्यटकहरूले आरक्षित गर्न यात्रा सन्तुष्ट छन्। तथापि, पूर्वाधार विकास सन्दर्भमा एक्सप्रेस इच्छा। सान्टा क्लाउस को निवास एकदम प्रवेश टाढा स्थित छ। तपाईं एउटा भ्रमण मा जाने भने, बस पर्यटक प्रवेश सम्म ड्राइव। तर स्वतन्त्र यात्रा कठिन। आखिर, कार पार्किङ धेरै बायाँ हुनुपर्छ। र बच्चा संग ट्रयाक (र पनि हिउँदमा) एक लामो समय को लागि मा जानुहोस्। पर्यटक जंगल को विशाल क्षेत्रमा मात्र एक रेस्टुरेन्ट छ, किनभने आफ्नो भोजन ल्याउन सल्लाह छन्। समीक्षा बेलारुस को गणतन्त्र चासो अन्य ठाउँमा एक यात्रा संग प्रकृति आरक्षित गर्न यात्रा संयोजन गर्न सल्लाह छन्। Bialowieza वन को XIV शताब्दीको टावर संरक्षित जो Kamenetz को शहर देखि टाढा छैन स्थित छ - टावर। एक ब्रेस्ट गढ वीर जानुहोस् पर्छ।
Anapa रेल प्राप्त कसरी?
Gelendzhik। पातलो केप। बाँकी बारेमा समीक्षा
कलिनिन्ग्राद छुट्टी समुद्र मा। बाल्टिक सागर, कलिनिन्ग्राद
आँखा-हीरा वा कसरी लामो समय को लागि दृष्टि संरक्षण गर्न
"शून्य प्रभाव": पछिल्लो परिहाल्छ गर्दा
बालिका र नाजुक कल्पना लागि crochet टोपी
रूस मा सबै भन्दा लोकप्रिय महिला पेशा
संगठन मा विभिन्न शक्ति र नेतृत्व
Hipped छत: छत माउन्ट प्रणाली
पेंशन "ब्लू मशाच", कोबेले: पर्यटकहरूको समीक्षा, विवरण र समीक्षा
वायरलेस videoglazok: विवरण र समीक्षा
को येन - एक धनी इतिहास संग जापानी मुद्रा